Ihe kpatara ndi mmadu ji edo gi na Twitter
Thursday, May 31, 2012 Tuzdee, Machị 1, 2016 Douglas Karr
Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ọchị infographics na DK New Media emeela rue taa. Anyị na-eme ọtụtụ nke infographics maka ndị ahịa anyị, mana mgbe m gụrụ akụkọ ahụ na eConsultancy ihe kpatara ndị mmadụ ji ewepụ na Twitter, echere m ozugbo na ọ nwere ike ịme ozi na-atọ ụtọ nke ukwuu. Onye na-ese ihe na-enye anyị ozi gafere nrọ anyị.
You na-eme mkpọtụ na Twitter? Are na-amanye ọtụtụ ahịa? You na-atụghị ụjọ na-etinye ndị mmadụ asị Ma ọ bụ na ị dị nnọọ nkịtị na-agwụ ike? Oburu na m nwere ike ighota otu okwu na ihe ndia nile, obu uru. Ọ bụrụ na ị naghị agbakwunye ndị na-ege gị ntị uru, ha agaghị anọnyere gị.
Na-ebughi n'ihu, lee ihe kpatara kpatara ndị mmadụ ji esoghị gị na Twitter.
Ekele pụrụ iche eConsultancy maka inye anyị ikike jiri data ha dee post!
Tags: ihe omumainfographichapụ twitterihe kpatara ndi mmadu ji adighiTwitterOzi infographichapụunfollow ihe kpatara twitter
Jun 1, 2012 na 7:02 AM
Hụ onye a n'anya, ọ ga-eme oke ntụtụ! Ga-ejide n'aka na o kwuru ebe o si bia.
Jun 1, 2012 na 9:10 AM
Jun 1, 2012 na 8:36 AM
Ihe na-adọrọ mmasị na-agụ. Nsogbu na mgbasa ozi ọha na eze bụ ndị mmadụ na-eche banyere onye na-eme ha. Enweela m ezigbo ndị enyi mere otú ahụ. Dị nnọọ mkpa ka onwe gị online na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-adịghị amasị ya mgbe ahụ na bụ mkpebi ha. Agbanwela onwe gị iji mee ka ndị mmadụ soro gị. Iji duhie Lincoln, "I nwere ike ime ụfọdụ ndị mmadụ oge niile, na ndị mmadụ niile oge ụfọdụ, mana ị nwere ike ịme ndị niile oge niile."
Jun 1, 2012 na 10:37 AM
@ twitter-14119971: disqus Ekwenyere m kpamkpam, Corey! Akwụsịrị m ichegbu onwe m banyere ọtụtụ ndị folks na-eso m ihe dịka otu afọ gara aga ma ọ dị mma. Nnwere onwe !!!
Jun 1, 2012 na 9:39 AM
Maka azụmahịa, enwere akara dị n'etiti ịdị irè na Twitter na iwe. Ọ na-adọrọ adọrọ ịdee ọtụtụ oge iji gabiga mkpọtụ na ọgba aghara niile, mana ị kwesịrị ịkpachara anya. Ọ bụrụ n’ịji otu ozi ahụ na-apụta na ndepụta ahụ, ndị na - eso ụzọ gị ga - ege gị ntị ma ọ bụ mepee gị.
Ọ na-eme m ka m chọọ ịhapụ ihe niile na-adịghị mma. Ug. Maka ọtụtụ akụkụ, anaghị m etinye uche na ihe ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ m na-tweeting enwere ole na ole na-etinye njikọ dị mma yana ọdịnaya ebe ahụ mana ọtụtụ na-eji ya dịka ụzọ iji nwee mkparịta ụka kachasị mma n'ebe ndị ọzọ. Ana m edepu ndepụta m ma kpochapụ ndị na-esoghị m, ma. N'ihe gbasara ịhapụ m, ọ bụrụ na m kpasuo iwu nke a maara m ịme, mepee m, mana egbula m banyere ya!
Ana m agbakwunye onye a na ntanetị ịntanetị m. Ekwenyere m na ọ na-esiri ike ịchọta onye nwere obi ụtọ n'etiti "ime mkpọtụ" na ịkekọrịta ọdịnaya dị mkpa ma na-atọ ụtọ mana isi ihe dị mkpa bụ iwulite ndị na-eso ụzọ nwere mmasị zuru oke na mgbasa ozi gị yana ịkpalite mkparịta ụka iji jikọọ ndị mmadụ n'ezie karịa "ịgbasa ozi. ”
Jun 6, 2012 na 2:21 AM
Inye “ihe na-ekwesighi ịbụ infographic”, gosipụta A.
Otu ihe a na-akọwaghị n'okpuru: ndị na-eso gị ụbọchị ole na ole iji hụ ma ị ga-esoghachi ha azụ. Nke ahụ yiri ka ọ bụ n'ọnụ ọgụgụ na ahụmịhe m.
Jun 6, 2012 na 2:40 AM
Ekwenyeghị m na gị ekwenyeghị na ya ọ nweghị mkpa ịbụ infographic. Ntọala ahụ adịghị agha… Nke a bụ otu n'ime ihe ọmụma anyị nwere ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na anyị dere banyere ya… Oh chere, e dere ya na blog post site econsultancy. Na post ahụ nwere obere mmasị na nke a mere.
Enweghị iwu na ihe kwesịrị ma ọ bụ na-ekwesịghị ime ka ihe infographic. Ihe ọchị na eserese nke ọma nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Ekwela ka echiche ọdịnala ma ọ bụ ọdịnala gbochie gị ịnwale ihe na-arụ ọrụ. Na nke a ọ rụrụ ọrụ ebube.
PS: Nchekwa onwe DMs nọ n'ebe ahụ 😉
Emebiela m ọnụ ọgụgụ na-ewere 100% = 2270 ngụkọta
Na-eme mkpọtụ (tweets kwa mgbe) [12% - 271 votes]
Nkwalite onwe onye nke ukwuu [11% - 249 votes]
Enweghị mmasị zuru oke [10% - 226 votes]
Nkwughachi oke [7% - 152 votes]
Akpaaka akụrụngwa [7% - 151 votes]
Ọfụma / enweghị ọrụ [6% - 146 votes]
Ọtụtụ 'na-arịọ tweets' [6% - 145 votes]
Nwee oke [6% - 141 votes]
Ndị na-eme mpụ / ebe ndenye ego [5% - 115 votes]
Enweghị mkparịta ụka tweets [5% - 108 votes]
Mpụ megide ụtọ asụsụ [4% - 93 votes]
Ọtụtụ retweets [4% - 90 votes]
Nchekwa onwe / DM [4% - 86 votes]
Hashtag na-emegbu mmadụ [2% - 52 votes]
ugbu a, m nwere ike na-tweeting… 😉
Dika m kwuputara n’elu, nke a abughi ikpe. Nke mbu, nyocha ahu bu ihe nlere emeghe ma mmadu puru iba otutu oge ha choro. Nke abụọ, ha nwere ike inye karịa otu oge. Biko lelee nyocha ahụ: http://twtpoll.com/un5lxe
ya mere na mkpokọta pasent niile gbakwunye na 435% ??? ndo, enwetaghị m ihe a… ma eleghị anya, onye mere ihe a mụọla 100% imewe na 0% maths?
Elena, ị na-eche na ndị zaghachirinụ nwere ike inye naanị otu azịza kwa nyocha. Nke ahụ abụghị ikpe.
Mee 16, 2014 na 4: 00 PM
I nweghị ike ịmasị mmadụ niile oge niile. Enwere ụzọ 3 dị iche iche ndị mmadụ si eji Twitter dị iche. Usefọdụ na-eji ya dịka ọ bụ nkata nzuzo. Ndị ọzọ dịka m jiri ya kesaa ọtụtụ ozi dị mma. Ndị na-enweghị mmasị na nnukwu olu abụghị ndị na-ege m ntị. Ọbụna ma ọ bụrụ na anaghị m ekerịta ọtụtụ, mkparịta ụka Twitter m na-esonye ga-eme ka ha nwee ego. Onye ọ bụla nke ha.
Mee 16, 2014 na 4: 02 PM
@Nick Stamoulis ekwere m. Zọ kachasị mma iji kesaa ihe karịrị otu oge bụ ịme ka tweet ọ bụla pụọ ​​iche ka ị ghara ịmụrụ onye ọ bụla. Nke ahụ ga - enyere gị aka ikwughachi ozi gị.